Ururka Daacish oo iclaamiyey in howlgal lagu dilay wiilka hogaamiyaha Daacish… – Hagaag.com
Ururka Daacish oo iclaamiyey in howlgal lagu dilay wiilka hogaamiyaha Daacish…
Ururka Daacish ama ISIS ayaa iclaamiyey in lagu dilay wiilka hogaamiyaha Daacish Abu-bakr al-Baghdadi oo la oran jiray Hudaifah al-Badri howlgal ka dhan ahaa ciidamada Suuriya iyo Ruushka ee warshada korontada koonfurta Homs ee Suuriya.
Bayaan la socday sawirka Hudaifah ayaa lagu sheegay “Wiilkii Khaliifka Abu Bakr al-Baghdadi ayaa lagu dilay howlgal Nisiriyah oo loola jeeda qolada uu ka soo jeedo Assad iyo Ruushka warshada korontada ama dabka ee gobolka Homs.”
Baqdaadi, oo dhowr jeer la iclaamiyey in la dilay, ayaa la rumeysan yahay in uu noolyahay kuna sugan yahay xudduudaha Suuriya iyo Ciraaq, sida uu sheegay sarkaal Ciraaqi ah horaantii bishi May ee la soo dhaafay.
Baqdaadi oo madaxiisa Washington dul saartay $ 25 milyan oo loogu talagalay qofka soo sheega meesha uu ku sugan yahay ama dila – wuxuu ka soo hor muuqday kaamirada mar keliya waa markii uu ku dhowaaqay dowlada khilaafada.
Marka laga soo tago muuqaalkan agoonta ah, Baghdadi ayaa dhowr jeer soo duubay cajalado maqal ah isagoo ugu baaqay taageerayaashiisa in ay “samir iyo dulqaad yeeshaan” ka soo horjeedka “gaalada” oo isku baheystay Suuriya iyo Ciraaq.
Dhambaalkii ugu dambayay ee al-Baghdadi ayaa ahaa 28-kii Sebtembar 2017, laba toddobaad ka hor markii laga fara maroojiyey xaruntoodii khilaafada ee Raqqa ee Suuriya.
Baqdaadi waxa la sheegay in uu dhalay afar caruur oo u dhashay xaaskiisa koowaad iyo mid kale oo dhashay xaaskiisa labaad.